प्रदेश ६ « The Nepal Top
राउटेले किन सम्झिए उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई ?
काठमाडौं : राउटे समुदायले शनिबार धुमधामसँग आफ्ना कूल देवता मस्टोको पूजा गर्दैछन् । जङ्गलमा फिरन्ते जीवन बिताइरहेका भए पनि उनीहरु कूल पुजाका लागि भ्याइनभ्याइ गरी खटिरहेका छन् । पहिले मस्टो
मुगु : नेपालको सबैन्दा ठूलो ताल तथा कर्णाली प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीयस्थलका रुपमा रहेको रारामा फोरजी सेवा सञ्चालन गरिएको छ । नेपाल टेलिकमको एक टोलीले रारा पुगेर फोरजी सेवा सञ्चालन गरेको
निर्माण पूरा भएको १३ महिनापछि मौसमी राडारको उद्घाटन
सुर्खेत : निर्माण सम्पन्न भएको १३ महिनापछि मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचना दिने प्रणाली ‘रेडियो डिटेक्सन एण्ड रेन्जिङ’ (राडार)को उद्घाटन गरिएको छ । सुर्खेत र दैलेखको सीमानामा पर्ने रातानाङ्लामा जडान गरिएको राडारको आज
जलेर दुई घर नष्ट
सल्यान : सल्यानमा दुई घर जलेर पूर्णरुपमा नष्ट भएका छन् । दार्मा गाउँपालिका–१ सिमलपुरमा आइतबार भएको आगलागीबाट ७५ हजार नगदसहित पाँच लाख बराबरको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ । आगलागीबाट
हुम्लामा मतगणना अनिश्चित
सुर्खेत : हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकामा अझै मतगणना हुन सकेको छैन । ग्रामिण क्षेत्रबाट गाउँपालिका केन्द्रमा मतपेटिका पुर्‍याउन ढिलाई भएपछि सर्वदलीय बैठक बस्न नसक्दा मतगणना हुन नसकेको हो । मतगणना सुरु गर्नका
मुगु: जिल्लाको मुगुम कार्मारोङ गाँउपालिका–८ माङ्ग्रीस्थ्ति बुद्ध माविमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत सीता कामी र छिरिङ कामी बालक्लवमा आबद्ध छन् । उनीहरु दुवै सरकारी तथा गैह्रसरकारी संस्थाका बालअधिकार संरक्षण तथा
अधिकार दिए, पैसा दिएनन्
जाजरकोट : विकास निर्माणका काम बजेट अभावले पूरा गर्न मुस्किल भएपछि जाजरकोटका जनप्रतिनिधि सङ्घीय सरकारको ढोका घचघच्याउन बाध्य भएका छन् । जिल्लाका स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, विद्युत् र सडक निर्माण गर्नका
टिप्पर दुर्घटनामा तीनको मृत्यु
सिमकोट : हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका–७ को लाग्नाडाँडामा आज साँझ टिप्पर पल्ँिटदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने १३ जना घाइते भएका छन् । नेपाल खाद्य संस्थानको चामल र अन्य बन्दोवस्तीको
सिमिकोट : हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिकामा बालबालिका ओसारपसार तथा बेचबिखन रोकथामका लागि सडक नाटक गरिएको छ । ‘लनल नेपाल’को आर्थिक सहायोग तथा ‘किर्डाक नेपाल’को आयोजनामा सडक नाटक सञ्चालन गरिएको हो ।
कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा ठेकेदारले पार्छन चामल गायव ?
हुम्ला : दुर्गम ठाउँको लागि सरकारले पठाएको चामल बीचैमा हराउने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यसरी नेपाल सरकारले नेपाल खाद्य संस्थानमार्फत दुर्गमका गाउँमा पठाएको खाद्यान्न बीच बाटोमै हराउने गरेको